Shaqaale Caafimaad Oo Maraykanka Ku Cunsurieeyay Haweenay Dhimanaysa – somalilandtoday.com
(SLT-Florida)-Afar ruux oo oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka degdegga ah bixiya oo lagu eedeeyay in ay midab takoor dartii gargaar caafimaad u siin waayeen haweenay dhimanaysa ayaa wajahaya dhagaysi dhanka anshaxa ah maalinta Talaadada.
Hooyada dhashay haweenaydan 30 jirka ah ayaa markaas go’aansatay in ay gaarigeeda ku gayso isbitaalka, intii ay sii wadayna Crystle ayaa miyir daboolan tay markii uu dhiig kar ku soo booday, waxayna dhimatay shan maalmood ka dib.
Hoyadeed ayaa saxaafadda Maraykanka u sheegtay “in ay ku celceliyeen in ay u baahantahay in isbitaal la geeyo? Iyaduna ay haa ku celcelinaysay iyadoo baryaysa.
“Dhiigga kama aysan cabbirin, qandhadeeda maysan cabbirin, waxyaabihii muhiimka ahaa oo dhan kama aysan cabbirin” ayay tiri Nicole.
“Waxay wakhtigoodii galiyeen in ay nagu qanciyaan in aanaan awoodi karin in aan iska bixino lacagta ambalaasta”.
“Waxay daliil ka dhiganayeen, soo ilmo yar ma haysataan? Xaqiiqo ahaan miyaad u baahan tihiin in meel dhaw 600 oo doolar ka bixisaan
Mike Merrill oo masuuliyiina deegaan kaas ka mid ah ayaa shir jaraa’id ka qiray Isniintii “in ay ku guuldarraysteen in ay adeeg caafimaad oo wanaagsan siiyaan haweenaydaas”.
“Shaqaalahanagu khaladaad badan ayay sameeyeen, masuuliyaddana waan qaadanaynaa” ayuu yiri waxaa kale oo uu qiray in shaqaalaha caafimaadku aysan haweenayda ka baarin xataa waxyaabihii aasaasiga ahaa.
“Haddii ay arrintani la xiriirto midab takoor waa in aan xallinaa si bulshadu ay u hesho adeeg caafimaad”.
Afartii ruux ee shaqaalaha ahaa oo kala ah , Lt John “Mike” Morris oo 36 jir ah, Justin Sweeney oo 36 jir ah, Andrew Martin oo 28 jir ah iyo Courtney Barton 38 jir ah ayaa fasax qasab ah loo diray.